ANDROID EMULATOR MAKA WINDOWS (MMEGHE EGWUREGWU NA USORO GAM AKPORO) - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Android emulator maka Windows (mmeghe egwuregwu na usoro gam akporo)
Isiokwu a bara uru nye ndị kpebiri ịgba ọsọ ngwa ngwa Android na kọmputa ha.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ otú ngwa ahụ si arụ ọrụ, tupu ibudata na mbadamba ma ọ bụ ama; ọma, ma ọ bụ na-achọ igwu egwuregwu ụfọdụ, mgbe ahụ ọ gaghị ekwe omume ime ya n'enweghị ihe emulator android!
N'isiokwu a, anyị ga-enyocha ọrụ emulator kasị mma maka Windows na ajụjụ ndị na-ebilikarị maka ọtụtụ ndị ọrụ ...
1. Ịhọrọ Emulator Android
2. Ịwụnye BlueStacks. Idozi Njehie Error 25000
3. Hazie emulator. Esi emeghe ngwa ma ọ bụ egwuregwu na emulator?
Ka ọ dị ugbu a, netwọk ahụ nwere ike ịchọta ọtụtụ emulator nke Windows maka Windows. Dị ka ihe atụ:
1) Windows Windows;
4) Ihe ntinye ngwa ngwa;
na ọtụtụ ndị ọzọ ...
Echere m, otu n'ime ihe kacha mma bụ BlueStacks. Mgbe niile njehie na nsogbu ndị m nwetara na ndị ọzọ emulator, mgbe ahụ mgbe ị wụnye nke a - ọchịchọ ịchọ ihe ọzọ kpamkpam ...
Onye ọrụ weebụsaịtị: //www.bluestacks.com/
- nkwado zuru oke nke asụsụ Russian;
- ihe omume ahụ bụ n'efu;
- na-arụ ọrụ n'ime usoro eji arụ ọrụ niile: Windows 7, 8.
Ekpebiri m ịkpụ usoro a n'ụzọ zuru ezu, n'ihi na ezighi ezi na-ebili ma mee ọtụtụ ajụjụ. Anyị ga-aga nzọụkwụ.
1) Download faịlụ installer nke. saịtị ma na-agba ọsọ. Window mbụ, nke anyị ga-ahụ, ga-adị ka foto dị n'okpuru ebe a. Kwere ma pịa ọzọ (na-esote).
2) Kwekọrịta na pịa.
3) Echichi kwesịrị ịmalite. Na n'oge a, njehie "Error 25000 ..." na - apụtakarị. Nanị n'okpuru ọ na-ejide na nseta ihuenyo ... Pịa "OK" na anyị nwụnye na-etisasị ...
Ọ bụrụ na ị wụnye ngwa ahụ, ị ​​nwere ike ịga n'ihu na mpaghara nke atọ nke isiokwu a.
4) Iji dozie njehie a, mee ihe 2:
- melite ndị ọkwọ ụgbọala maka kaadị vidiyo. A na-eme nke a nke ọma site na ebe nrụọrụ weebụ AMD ndị ọrụ site na itinye ụdị nke vidiyo gị na nyocha ọchụchọ. Ọ bụrụ na ị maghị ihe nlereanya ahụ - jiri ọrụ iji chọpụta àgwà nke kọmputa ahụ.
- budata BlueStacks ọzọ. Ị nwere ike ịbanye n'ime nyocha ọ bụla search engine "BlueStacks_HD_AppPlayerPro_setup_0.7.3.766_REL.msi" (ma ọ bụ i nwere ike ibudata ya ebe a).
Imelite ndị ọkwọ ụgbọala MPD AMD.
5) Mgbe ị na-emelite ọkwọ ụgbọala vidiyo ma na-ebupụta onye nhazi ọhụrụ ahụ, usoro nhazi ahụ na-agba ọsọ ngwa ngwa n'enweghị njehie.
6) Dị ka ị nwere ike ịhụ, ịnwere ike ịgba ọsọ egwuregwu, dịka ọmụmaatụ, Dọrọ ọsọ! Esi edozi ma merie egwuregwu na mmemme - lee n'okpuru.
1) Ịmalite emulator - mepee onye nyocha na n'akụkụ aka ekpe gị ga-ahụ taabụ "Ngwa". Mgbe ahụ jiri obere aha ahụ megharịa.
2) Iji mee ntọala zuru ezu maka emulator, pịa na "ntọala" akara na akuku aka nri ala. Lee nseta ihuenyo n'okpuru. Site n'ụzọ, ị nwere ike ịhazi otutu:
- njikọ na igwe ojii;
- họrọ asụsụ ọzọ (ndabara ga-abụ Russia);
- gbanwee ntọala ntọala;
- gbanwee ụbọchị na oge;
- gbanwee akaụntụ njirimara;
- jikwaa ngwa;
- megharia ngwa.
3) Iji budata egwuregwu ọhụrụ, gaa na taabụ "egwuregwu" na menu kachasị elu. Tupu ị mepee ọtụtụ egwuregwu, wepụta ya n'ụdị ọkwa. Pịa na egwuregwu ịchọrọ - windo nbudata ga-apụta, mgbe oge ụfọdụ a ga-arụnye ya.
4) Iji malite egwuregwu ahụ, gaa "Ngwa ngwa m" (na menu n'elu, n'aka ekpe). Mgbe ahụ ị ga-ahụ ngwa ahụ awụnyere n'ebe ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ebudatara m ma malite egwuregwu ahụ "Na-agba ọsọ" dị ka nnwale, dị ka ihe ọ bụla, ị nwere ike igwu egwu. 😛